Ama-Freshworks: Amamojula Wokusetshenziswa Kwezinga Lokuguqulwa Eliningi ku-One Suite | Martech Zone
Ama-Freshworks: Amamojula Wokusetshenziswa Kwezinga Lokuguqulwa Eliningi ku-One Suite
NgoLwesihlanu, Mashi 30, 2018 NgoLwesine, Novemba 5, 2020 U-Arvind Parthiban
Kule nkathi yedijithali, impi yesikhala sokumaketha isishintshile online. Ngabantu abaningi abaku-inthanethi, okubhaliselwe kanye nokuthengisa kusukile endaweni yabo yendabuko kuya kokusha, okudijithali. Amawebhusayithi kufanele abe kumdlalo wawo omuhle kakhulu futhi acabangele ukwakheka kwamasayithi nesipiliyoni somsebenzisi. Ngenxa yalokhu, amawebhusayithi abaluleke kakhulu emalini etholwa yinkampani.
Njengoba kunikezwe lesi simo, kulula ukubona ukuthi kanjani ukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwa, noma i-CRO njengoba yaziwa kanjalo, isiphenduke isikhali esibalulekile kunoma isiphi isikhali somthengisi se-tech-savvy. I-CRO ingenza noma iphule ubukhona becebo lokumaketha ku-inthanethi lenkampani.
Amathuluzi amaningi e-CRO ayatholakala emakethe. Inkinga, nokho, ukuthi i-CRO isasebenza kahle. I-Evolution kwezobuchwepheshe ayiboniswanga ngendlela esenza ngayo izinga lokuguqulwa.
Ukulungiswa kwezinga lokuguqulwa kungumsebenzi onzima. Nasi isimo esijwayelekile:
Umthengisi kufanele kuqala alayishe ikhasi ngethuluzi. Unekhofi futhi ubheka ama-imeyili akhe njengoba ikhasi lilayisha. Ngemuva kwalokho, kuqala ukwenza izinguquko ekhasini. Futhi-ke udinga ukuthatha usizo lweqembu lakhe lobuchwepheshe ukwenza izinguquko kuwebhusayithi yakhe. Futhi-ke, wenza izivivinyo ukubheka ukuthi ngabe zonke izinto ezisekhasini zibekelwe bona. Uma kungenjalo, uqala futhi, lapho elayisha ikhasi, bese eba nenye ikhofi. Ukusho ngokusobala, usabambelele enkambisweni eyalandelwa lapho kwethulwa ukwenziwa kwewebhusayithi - Futhi nathi sonke sinjalo. Akukaze kube khona okusha okusha ku-CRO, ngokuxakile ngokwanele.
Noma kunjalo, iFreshworks inempendulo. I-Freshmarketer (phambilini iZarget) yasungulwa ngo-2015 ukuletha izinto ezintsha embonini eyayingakaze ibone intuthuko ebonakalayo eminyakeni edlule nokuqeda ukuthembela kwabathengisi konjiniyela ukuze basebenzise kahle futhi baqhube izivivinyo ezazikhona ngaphambili.
Izinkampani ezibheke ukwenza ngcono amazinga okuguqulwa kwesayithi labo bekufanele ngaso sonke isikhathi zithembele kuxakaxaka lwamamojula ahlukahlukene ukufeza izinhloso zazo, futhi zithenge imikhiqizo eminingi yesoftware yomkhankaso owodwa - Into ethiwa yi-Freshmarketer ifuna ukubhekana ngokunikeza amamojula wokusebenzisa amaningi kumkhiqizo owodwa wesoftware , ngaleyo ndlela kuqedwe isidingo sokubheka okunye ukuqedela inqubo.
Ngamanye amagama, ukwenziwa kokuphela kokuphela manje kungenzeka, kusetshenziswa umkhiqizo owodwa wesoftware - obizwa nge- Indawo ye-CRO. Ithimba likaFreshmarketer lithanda ukucabanga ngokuguqulwa njengenqubo yokujikeleza kunokuba yinto eqondile, lapho imininingwane evela kumawebhusayithi inikeza imininingwane, oyisebenzisela ukwakha imicabango, oyisebenzisayo njengesisekelo sokwenza kahle, nakho okunikeza imininingwane eminingi - Nemijikelezo elandelayo komjikelezo uyalandela.
Isixazululo esiyingqayizivele seFreshmarketer silele ku-plugin yayo ye-Chrome, naku-suite yayo yokuguqula konke. I-plugin yayo yokuqala ye-Chrome yomkhakha ikwenze kwaba lula kakhulu ukuhlola nokwandisa amakhasi okuphuma, ngaphambili ayekade engekho emikhawulweni. Amathuluzi wokwenza kahle ngokwesiko ayenqunyelwe ngoba ayefuna ukuthi abasebenzisi balayishe amakhasi abo ngenye isayithi. Lokhu kubeka ubungozi kwezokuphepha futhi kwasho nokuthi lawa mathuluzi anokulinganiselwa okukhulu kulokho abekwazi ukukwenza. Kodwa-ke, iqembu likaFreshmarketer lidlule yonke le mikhawulo. I-suite yayo yokuguqula konke inye ifaka ama-Heatmaps, Ukuhlolwa kwe-A / B, kanye noHlelo Lokuhlaziywa ndawonye.
Nazi izinto ezinhle ongazenza ngeFreshmarketer:
Lungiselela futhi uhlole amakhasi ngqo kusuka kusiphequluli sakho, nge I-plugin ye-Freshmarketer's Chrome.
Buka imibiko yedatha ebukhoma - Imininingwane njengoba futhi lapho ukuhlangana kwenzeka. Akusekho izifinyezo.
Sebenzisa amaningi anamandla Amamojula we-CRO ngomkhiqizo owodwa nje.
Landelela ukuchofoza ezintweni ezibandakanyayo zewebhusayithi.
Enza ngendlela oyifisayo ama-URL kalula, ngosizo oluncane oluvela eqenjini lakho lobuchwepheshe.
Thola izixazululo ezihlanganisiwe lapho usebenzisa amamojula ngamanye. Kubandakanya ukuhlolwa kwe-A / B ngamamephu wokushisa akhelwe ngaphakathi
Inqubo yomjikelezo wokuncoma ukusebenza kwe-Freshmarketer iqala ngokuhlaziywa kwefaneli. Ukuhlaziywa komsele kulapho iqoqo lamakhasi elisebenza njengendlela yokuguqula lihlolwa khona ukubona ukuthi izivakashi zehla kuphi kufaneli. Lokhu kukusiza wazi ukuthi izivakashi zihlangana kanjani kumongo omkhulu wokuguqulwa.
Okulandelayo, uqhubekela phambili usebenzisa ama-heatmaps, ahlanganiswe nokuhlaziywa kwe-funnel. Ama-heatmaps ayizikhombisi zemininingwane ehlanganisiwe yokuchofoza ikhasi. Zikukhombisa izinto zewebhusayithi ezisebenza kabi, nokuthi yiziphi izingxenye zesayithi lakho ezidinga ukulungiswa. Ngemuva kokufunda lapho ziyahamba, uyafunda kungani bayashiya.
Lapho usuzibonile izinto zakho ezibuthakathaka namakhasi, ungaqhubekela esinyathelweni sokugcina - ukuhlolwa kwe-A / B. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi uqale ukuhlolwa kwe-A / B, kungcono ukwakha imibono eqinile yokuhlola. Ukucabanga kokuhlolwa kwe-A / B kufanele kususelwe kumininingwane evela ekuhlolweni kwakho kwangaphambilini. Ukuhlolwa kwe-A / B kulapho kwenziwa khona ushintsho ekhasini, bese ligcinwa njengokuhlukile. Ithrafikhi yezivakashi ihlukaniswe phakathi kwalezi zinhlobonhlobo, naleyo enokuguqulwa okungcono 'iwina'.
Futhi uma usushiywe ngenguqulo engcono yesayithi lakho, uqala umjikelezo futhi!
Sisebenzise i-Freshmarketer ekhasini lethu lokubhalisa, senza ama-tweaks kulo ngokuya ngemibono eyenziwe ngemininingwane eqoqwe kusetshenziswa i-Freshmarketer, ekhulise ukusayinwa ngama-26% kungakapheli izinsuku ezintathu. UShihab Muhammed, iNhloko ye-BU eFreshdesk.
Ngokuya ngocwaningo nokubonwa ngongoti bezimboni, ukwenziwa kwamazinga okuguqulwa kulungele ukubona ukukhula okukhulu eminyakeni ezayo njengoba abathengisi abaningi ngokwengeziwe bebeka ukubaluleka kweCRO emikhankasweni yabo. Ngokunikezwa kokuguquguquka kwayo, ukusetshenziswa kalula, nezici ezihlukile, iFreshmarketer ibekwe kahle ukuze izuze intuthuko emkhakheni.
I-Freshmarketer imele ukweqa kokuziphendukela kwemvelo maqondana nokuthi izinkampani zingenza kanjani ukuguqulwa futhi zibone ngokujulile ekusebenzeni kwesayithi. Cabanga ngentuthuko ehamba kancane embonini yethu uma iqhathaniswa nemboni yomculo, esuke ngokushesha isuka kumarekhodi yaya kuma-CD, yaya kuma-iPod, yagcina isakazwa. I-plugin yethu ye-Chrome yisinyathelo esilandelayo ku-CRO futhi imele ikusasa lokusebenziseka kwezinga lokuguqulwa, ngenxa yemizamo yethu yokulenza lingabi namthungo futhi lisebenze kahle ngokuhlanganisa amamojula ahlukahlukene wokuguqula. Silindele ukwamukelwa okusheshayo njengoba isidingo kanye nesabelomali sokusetshenziswa kwezinga lokuguqulwa kukhuphuka emhlabeni jikelele. Amafemu e-E-commerce kanye ne-SaaS azobona ngokushesha izinzuzo zokuba ne-suite eyodwa yokwenza imephu yesikhathi sangempela yokushisa okuhlanganiswe ne-A / B kanye nokuhlolwa kwe-funnel.
Zama i-Freshmarketer Mahhala
Tags: ukuhlolwai-plugin ye-chromeukuguqulwa kokuhlelwaukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwakhokhoi-cro suitenewmarketerokushaukuhlaziywa kwefanelii-Google Chromei-plugin ye-google chromeimephu yokushisaukushisa amabalazweukwakheka kokushisaimephu zokushisaukubika kwedatha bukhomaimibiko yedatha ebukhomaukuthuthukisahlukanisa ukuhlolwa kwe-URLukulandelwa kwethrekhii-zarget
U-Arvind uyi-CEO futhi ungumsunguli we I-Zarget, lapho ngaphezu kokucabanga ngombono wenkampani nokuhlola indlela yokusebenza ukuhlangabezana nezinhloso zabo, njengamanje uhola ukumaketha kwemikhiqizo, ama-presales nemisebenzi yokuthengisa. Owayekade eyisisebenzi saseZoho lapho ahola khona ukukhangiswa kwemikhiqizo ye-ITSM suite yemikhiqizo ehamba phambili, u-Arvind uthole imininingwane ebalulekile embonini ye-SaaS nakuzo zonke izinto 'Zokumaketha'. U-Arvind udonsa emnothweni wakhe omkhulu wokuhlomisa amandla amayunithi ebhizinisi phambili. Ungumlandeli wokuqina weChelsea.
I-Anchor: I-Podcasting yamahhala, elula, ephathekayo
Lungisa: Ukulinganiswa Kokumaketha kohlelo lokusebenza lweselula nePlatform Yokuvimbela Inkohliso